oil – Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မြေပဲကို လှော်တာ၊ ကြော်တာ၊ ပြုတ်တာ၊ ဟင်းချက်တာ စတဲ့ နည်းအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ပြီး စားသုံးနိုင်တဲ့အပြင် မြေပဲကနေ ဆီထုတ်ပြီးလည်း ဟင်းချက်ဆီအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မြေပဲဆီက အဝါရောင်ရှိပြီး အနံ့သင်းပျံ ့ကာ ချိုမြိန်တဲ့အရသာကို...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. တစ်လကျော်ခန့် သတ်မှတ်ရက်လွန် ပြည်ပနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ နေကြာဆီတစ်မျိုးကို တစ်ခါတစ်ရံ စားသုံးမိရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ အသည်းကင်ဆာဖြစ်တတ်လား၊ အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး ဖြစ်မှာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ A. ရက်လွန်နေကြာဆီစားမိလို့ သေချာတာကတော့ အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး ဖြစ်စရာအကြောင်း...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပဲပိစပ်ဆီက ပဲပုပ်စေ့က ရယူထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖြစ်ပြီး နှလုံးကျန်းမာစေတာ၊ သွေးတွင်းကိုလက်စထရော လျော့ကျစေတာ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်စေတာ၊ အရိုးပါးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတာနဲ့ ကြီးထွားမှုတိုးစေတာ အစရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေပါတယ်။ သွေးတွင်းမကောင်းသော ကိုလက်စထရော လျော့ကျစေခြင်း ပဲပိစပ်ဆီမှာ...
* သံလွင်ဆီကို အစားထိုး သုံးစွဲတာကြောင့် သွေးတိုးကို ကျစေနိုင်ပါတယ်၊ တချို့ကင်ဆာတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားပေးပါတယ်၊ * ဆီးချိုရောဂါရှိ သူတွေမှာ ကောင်းကျိုးရှိသလို ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင် ခြေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ * ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါနဲ့ အဆစ်ရောင်နာ ဝေဒနာရဲ့...
(၁). စိုးရိမ်သောကများခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း လာဗန်ဒါရနံ့ဆီ ရှူရှိုက်တာကြောင့် စိုးရိမ်သောကများတာနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၂). အိပ်မပျော်ခြင်း လာဗန်ဒါရနံ့ဆီ ရှူရှိုက်တာကြောင့် ညဘက်မှာ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်မောကျစေပါတယ်။ (၃). အစာခြေလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ လာဗန်ဒါရနံ့ဆီ ရှူရှိုက်ပေးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဆီတွေကို...
နေကြာဆီဟာ နေ့ကြာစေ့ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆီဖြစ်ပြီး ကြော်ဖို့အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေထဲမှာ အသားအရေ ချောမွေ့ဖို့လည်း သုံးကြပါတယ်။ – နေကြာဆီမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့ ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှုမရှိပါဘူး။ – နေကြာဆီက အရသာအားဖြင့် ပေါ့ပါးပေမယ့် တခြားဟင်းသီး...
Q. ဆီများများ စားတာကြောင့် အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားရှင်။ လွင်လွင် ၊ ပဲခူး ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဖြေကြားပေးပါသည်။ ဆီများများစားတာကအမြဲတမ်းနဲ့သိပ်ကြာလာရင်မကောင်းပါဘူး။ဆီများများစားတာက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို မြင့်တက်စေနိုင်လို့ပါ။ အဲဒီအခါ သွေးထဲက မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော(LDL) တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် အသည်းကို...